Best uphahla zokutyela Kwaye zokudla EYurophu | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > Best uphahla zokutyela Kwaye zokudla EYurophu
Ixesha lokuFunda: 4 imizuzu(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 05/12/2020)
Ngaba uluhlobo lomntu othanda ukuhamba ngeenyawo kunye nebhasi? Ngoko le posi ayikho kuwe! Sicinga ndlela ilungileyo ukubona ezinye iisayithi eYurophu lenkundla ngayo ufunxa champagne kwi ithala kuphahla okanye cafe. Here are some Best rooftop restaurants and cafes in Europe so you can sight-see in style.
Egqibeleleyo uphahla kunye cafes eYurophu: Atlante Star Hotel – Rome, ElamaTaliyane
nini eRoma, Kuya kufuneka ubone zonke iindawo ezintle nezindala- ezinje ngeColosseum okanye Umthombo waseTrevi. Kodwa kwakhona kufuneka sibe Imbonakalo entle emzini. and, xa wayetyelele bar kuphahla Atlante Star Ihotele ube nembono kumazwe amabini. Kungenxa yoko le nto sicinga ukuba yenye yezona ndawo zokutyela zisemaphahleni kunye neefestile zaseYurophu!
Nandipha iimbono elithandekayo esikaPhapha naseRoma xa nokuba i espresso okanye iglasi isiselo somdiliya. Akukho iinketho ezininzi ukuphelisa ngcono kunokuba apha imini!
Ukuhamba eRoma ngololiwe
oololiwe Fast evela London to Rome take around 14 iiyure, covering a distance of approximately 1,434 iikhilomitha. Kukho iinkonzo rhoqo kwi umzila kaloliwe phakathi London neRoma. Trains for this journey usually open for booking around 12 iinyanga ngaphambili. Ukuba ukubhukisha akukaza kuvulelwa imihla yakho, ungaseta isilumkiso sokubhukisha ukuze ufumane i-imeyile ngomhla apho amatikiti aphantsi afumanekayo kuhambo lwakho ukusuka eLondon ukuya eRoma ngololiwe. Sebenzisa Gcina A Isitimela uku-odola ngokukhawuleza kwaye ngokulula!
Egqibeleleyo uphahla kunye cafes eYurophu: I-Cube Bar - Galeries Lafayette - Paris, Fransi
Kuba enye iimbono best Paris, oqo- ukuya kuphahla le Galeries Lafayette isebe ivenkile. Imigangatho esixhenxe phezulu, kulo ithala 1500m inika umdla ngokwenene 360 ​​° phezu Paris. I-Opera House mbende kunye Eiffel Tower umzobo wayo. Kodwa hayi kuphela iimbono, but the terrace also holds a modern and sleek rooftop bar called The Cube Bar.
Vula-moya nezendalo ekumiseleni, ithala inikeza esihlalweni zombini kwimimandla elangeni egqubuthele ngakumbi emthunzini. Ukusuka bar lwendlu, ukuba ingayalela ibhiya ebandayo, cocktails ahlaziyayo kunye izmuncumuncu izindawo. Ngokuqinisekileyo le yenye yeendawo zokutyela eziphambili kunye neefestile eYurophu, ngoko ube kwangethuba ukuze ubambe isihlalo!
Ukuya Paris ngololiwe
ILondon njengesiqalo ethandwayo abahamba emininzi iholide yabo zaseYurophu. A elifutshane train ride ukhululekile inxibelelanisa likomkhulu British ne kwisixeko yaseFransi uthando, Paris.
Inye kuphela uloliwe isebenza ngqo London to Paris: i Eurostar-high speed ngololiwe. Ngoko ke yenza ekhetha ilungelo aqeqeshe bit lula! Qiniseka ukuba bathenge amatikiti etreyini yakho nge Gcina A Train nakuba!
Egqibeleleyo uphahla kunye cafes eYurophu: Aria Hotel High Note Sky Bar – Budapest, Hangari
Aria Hotel High Note Sky bar in Budapest inikeza umbono enkulu degree-360 ka Buda and Pest. Le sise intliziyo Pest, ongangokugibisela ilitye nje kude St. UStefano Basilica. Le bar elihle ezinamagama unalo vibe owenza kakhulu, kwaye yindlela egqibeleleyo ukuze Budapest nge usapho kunye nabahlobo.
Ukuya Budapest ngololiwe
the uloliwe journey from London to Budapest is safe, lula kwaye zibe nokufumaneka kwaye ithatha nje 24 iiyure, yi Eurostar ukuya eParis no-high speed TGV ukusuka eParis eMunich, then overnight sleeper to Budapest. Okanye kukho unxibelelwano nge eParis kunye eMunich, okanye nge Brussels, Cologne & Vienna.
Egqibeleleyo uphahla kunye cafes eYurophu – Barcelona
1881 per SAGARDI is the restaurant of the Imbali Museum of nase-, indawo ekhethekileyo isixeko ephezu kwizibuko Barcelona waza wazahlulela ngokupheleleyo iMeditera kwase, ukusuka elwandle lomhlaba. lo amava lugqitywe kwi Terrace of Indianes, owayephila ithala cocktail bar elibheke kwizibuko Barcelona.
Ukuhamba ku Barcelona ngololiwe
Kulula ukuba ahambe ukusuka UK ukuba Spain ngololiwe. A morning Eurostar to Paris in 2h20 from £44 one-way or £58 return, lunch at the remarkable Train Bleu restaurant at the Gare de Lyon, then the afternoon double-deck TGV engayi to Figueres (for the Salvador Dali Museum), Girona & Barcelona ukusuka € 39 indlela ngalinye. *Amaxabiso phantsi utshintsho.
Ukulungele ukuba apakishe iibhegi zakho sityelele zokutyela Best lwendlu kunye cafes eYurophu? Vumela Gcina A Isitimela ukuthatha unonophelo wokufika kwakho apho kufuneka ukuba ube!
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog kwi sayithi yakho, ungakwazi noba uthathe iifoto zethu kunye nombhalo kunye nje zisinika ngetyala ngekhonkco kule post blog, okanye cofa apha: https://embed.ly/code?url = https://www.saveatrain.com/blog/best-rooftop-restaurants-cafes-europe/- (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
#BestCafes #BestEuropeRestaurant #BestRestaurants #cafeview #restaurantview #uphahla europetravel longtrainjourneys Tranride train Travel